गसिप Archives - Page3of 10 - Purbeli News
काठमाडौं । गायिका अञ्जु पन्तको स्वरमा जति भावुकताको मिठास अरुका स्वरमा विरलै भेटिएला । एउटा गजलमा भरेको स्वरले दिएको उचाईसँगै अञ्जुको गायन यात्राले पनि गति लियो । गायन नेपालमा एउटा राम्रो पेशा पनि बनिसकेको छ । यो सौखमात्र होइन, व्यावसायीकतामा परिणत भएको छ । व्यावसायीकतामा परिणत भएको पेशासँग त्यस व्यक्तिको चरित्र, चित्र र नीजि व्यवाहार पनि जो...
म घमण्डी छैन – नायिका माला लिम्बु
नायिका माला लिम्बु राम्रो अभिनय गर्ने कलाकारमा पर्छिन । कुनै चलचित्र खेल्नुअघि कथा हेर्ने र सो बिषयमा छलफल गरी सुझाव समेत पेश गर्ने बानीका कारण निर्माताहरु उनलाई चलचित्रमा खेलाउन डराउँछन । हक्की स्वभाव भएकी लिम्बु कुनै कुरामा चित्त नबुझे सिधै असहमति समेत जनाउँछिन । तपाई हक्की कि घमण्डी ? म दुबै होईन । म आफुलाई सही लागेको कुरा सहज ढंगले राख्छु...
जाग्यो श्वेताको बिहे गर्ने रहर !
श्वेता खड्कामा आएको परिवर्तन सामाजिक सञ्जालको टाइम लाइनमा हेर्दा थाहा हुन्छ । लगभग दिनमा दुई चार फोटो पोस्ट हुन्छन् र सोही अनुसारका स्टाटस पनि । जबकि दुई वर्षअघि श्वेता फेसबुकमा निस्क्रिय जस्तै थिइन् । मान्छे परिवर्तन हुन पाउन्न भन्ने होइन । श्वेतामा पनि परिवर्तन आएको छ, ठूलो कुरा होइन तर यतिबेला श्वेता आफ्नै वचनमा फँसेको अड्कल सुरु भएको छ । ...
काठमाडौं । अहिले विश्वभर नै विश्वकप फुटबलको माहोल छ । विश्वभर चर्चामा रहेको विश्वकपको चर्चा र क्रेजबाट नेपाल पनि अछुतो रहन कहाँ सक्छ र ? नेपालको खेलकुद क्षेत्रमात्र नभएर हरेक तह र तप्काका मानिसहरुले विश्वकप हेर्ने गर्छन् । यस्तैमध्येका एक हुन् हाँस्यकलाकार तथा चलचित्र निर्माता दीपराज गिरी । विश्वकपको बारेमा थाहा पाएदेखी र हेर्न थालेदेखि नै दीपक ...
ईटहरी/ नेपाली संगीत आकाशमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाएर आफुलाई परिचित बनाएका भर्सटाईल गायक राजेश पायल राई बेलाबेला बिभिन्न कुराहरुले चर्चामा आउने गर्छन । बढि त उनी नायिका रेखा थापाको नामले चर्चामा आउने गर्छन तर यो पाली भने उनी फरक रुप र शैलिमा चर्चामा छाउदै छन । कुरा हो उनले एक काली युवती संगै खिचेको तस्बिरलाई फेसबुकमा अप्लोड गरेको । सार्बजनिक त...
काठमाडौं । फिल्म निर्माता दिपकराज गिरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हरेक विषयमा व्यंग्य गर्न आतुर हुन्छन् । व्यंग्यले अरूलाई हैरान पार्ने दिपकलाई यसपटक फिल्म हलवालाले ‘खुत्रुक्क’ हुनेगरी भनेका छन् । तर्क मागिरहेका क्युइफएक्स संचालक भाष्कर ढुंगानासामु अन्तत: दिपकले आत्मसमर्पण गर्दै ‘माया’को ढालले छेकेका छन् । दिपक र भाष्करबीच एउटा फेसबुक स्ट्याटसपछि तर्क...
२०७४ मा घरबार (भत्किएका) सम्बन्ध विच्छेद भएका जाेडीकाे नामकाे सुरूकाे अक्षर(Alphabet) मिले पनि सम्बन्ध टिकेन मनोज–मीना हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले २०७४ सालमा आफ्नी श्रीमती मीना गजुरेल ढकालसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन्।२२ वर्ष लामो वैवाहिक जीवनपछि उनीहरू अलग्एिका हुन्। यो जोडीका दुई सन्तान छन्। रीमा–रोबर्ट अभिनेत्री रीमा विश्वकर्माको वैवाह...
‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०१८’को उपाधि जितेकी खतिवडाको यस्तो छ ब्वाईफ्रेण्ड
काठमाडौं । ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०१८’को उपाधि जितेकी हेटौडाकी २२ वर्षीय शृंखला खतिवडाको पर्सानल कुरा बाहिरीएका छन् । खतिवडा ब्वाईफ्रेण्ड भएको कुरा मिडियामा छाएका छन् । उनी मिस नेपालअको उपाधी जितेकै केही दिनमै उनको ब्वाईफ्रेण्ड सार्वजनिक भएको हो । सामाजिक संजालमा उनको चर्चा संगै उनको प्रेम प्रसँगलाई लिएर पनि विभिन्न मिडियामा उनको राम्रै चर्चा भइरहेक...
म २ वटा श्रीमान राख्छु : रवीना देशराज
सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने बोल्ड धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजले अाफुले २ वटा श्रीमान राख्न चाहेकाे बताइकी छन । प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकममा प्रकासित अन्तर्वातामा यस्ताे बताएकी हुन ।देशराजलाइ महिला झन बोल्ड हुँदै गएपछि परिवारमा बिखण्डन आइरहेको छ भन्छन्, हो त ? भन्ने प्रश्नमा ‘मेरा एकजना आफन्तसँग एकदिन कुरा गर्दैथिएँ । उहाँ...